Fannaan Geyiga Soomaalida Caan Ka Ahaa Oo Geeriyooday - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Muqdisho(ANN)-Allah ha naxatiistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Warsame oo xalay ku geeriyooday, halkaa kadib muddo ku dhaw 18 sannadood oo uu xanuunsanayay.
Aaska Cabdi Tahliil Warsame ayaa waxaa ka qeyb-galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada qaranka, abwaano, fanaaniin iyo ehellada fannaanka iyo dadweyne kale.
Heestan oo ilaa maanta kaalmaha hore kaga jirta heesaha aad loo dhegeysto, waxa u dhiibay Abwaan Axmed Saleebaan Bide.
Sannadkii 1971-kii wuxuu ka qeyb galay tartankii heesaha hirgalay waxaana ku weheliyay fannaaniin ay ka mid ahaayeen, Cabdullaahi Cumar Xarago, Cabdi Xasan Dige, Cumar Nuur Cabdule iyo Xasan Aadan Samatar.
Fannaaniintan dhamaantood waxay ku biireen xidigihii kooxdii Hobalada Waaberi.
Allaha ha unaxariistee guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed meel walbo oo ay dalka ka joogaan ayaa ka tacsiyadeeyay geersida ku timid, waxaana ay Alla uga baryeen inuu janadiisa fardowso ka waraabiyo samir iyo iimaane uu ka siiyo dhammaan qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay.